Maitiro ekushandisa sei piramidhi yeMaslow muCommerce? | ECommerce nhau
Iyi ndeimwe yenyaya dzakaomarara kutsanangura mukushambadzira kwedhijitari nekuti iwo mazano asina kufambiswa nechikamu chikuru chevashandisi veadhijitari. Asi kutanga, zvinofanirwa kutaurwa kuti piramidhi raMaslow rinongova hutongi hwezvido zvevanhu. Saka kuti igone kutsanangura maitiro avo nezviito uye zvingave zvishoma sei zvisati zvaitika zvirevo zveCommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana.
Kukosha kwaro kuri mune chokwadi chekuti haina chete chinokanganisa maitiro epfungwa yemunhu, asiwo kushambadza. Uye ichi ndicho chikamu chePiramidhi raMaslow rinotifadza zvakanyanya nekuti rinogona kukanganisa hukama hwekutengesa nechero chirongwa chedigital uko kutengeswa kweshumiro kana chigadzirwa kunoitika.
Mukati memamiriro ezvinhu akajairika, zvakakosha kuti uzive kuti iyi piramidhi yakakosha inogona kushandiswa kusimudzira kutengesa kwedu chero nguva uye chero mamiriro ezvinhu. Kuti tiite kuti bhizinesi redu rionekwe pakati pevangangove vatengi kana vashandisi. Zvakare kuratidza kana kugovera zvigadzirwa kana masevhisi ayo anotengeswa kuburikidza neyedu online bhizinesi.
1 Piramidhi yeMaslow, ndeapi maitiro ayo?
2 Mhedzisiro yainayo pane zvekutengeserana zvemagetsi
3 Kushanda kwaro mukutengeserana kwedigital
4 Zvidzidzo zvinoverengeka zvatinogona kutora kubva kudzidziso iyi
Piramidhi yeMaslow, ndeapi maitiro ayo?
Iyi piramidhi inogona kupa akateedzana nezvezvakasiyana kubhizinesi rako raunofanira kuziva kuti utore mukana wavo kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, iwo atinokufumura pazasi:
Zvinosanganisira kunzwa kwekuve weboka renzanga. Uye ichi chinhu chinogona kutamisirwa nehumwe nyore kune iyo dhijitari svikiro iwe yaunomiririra uye pasina kuchinja manejimendi zano.
Kuziva zvinodiwa. Imwe yemhedzisiro inogona kushandiswa mukushambadzira zvemagetsi ndeyekuti pakupedzisira iwe unokwanisa zviri nani kuzadzisa zvinangwa zvako zvemari.
Kubudirira mubhizinesi. Iri zano mune rako manejimendi manejimendi rinogona kuenda kumberi uye kuvhara iro rehunyanzvi munda. Akazviita sei? Zvakanaka, kukutora iwe kuti uve nemanzwiro chaiwo ekuti iwe wakabudirira kubudirira mumabasa ako ehunyanzvi.
Dhinda mumwe munhu. Izvo hazvigoneke kuti imwe yedzidziso huru idzo Maslow's Pyramid inogona kukupa iwe ndeyekuti uzvisimbise iwe mune zvese zvauri kuita kusvika parizvino. Seyambiro yekutyaira kusimudzira bhizinesi rako kana chitoro chemagetsi.
Mhedzisiro yainayo pane zvekutengeserana zvemagetsi
Kubva ikozvino zvichienda mberi, isu tichaenda kudzidza nezve mhedzisiro iyo Maslow's Pyramid ine pane yako yehunyanzvi chiitiko. Iwe uchaona kuti ivo vari kupfuura iwe zvaunofunga pakutanga uye zvakare neakasiyana maitiro, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora mumaminetsi mashoma.
Pyramid yeMaslow inogona kuita kuti bhizinesi rako rioneke rakavandudzwa, zvese mukuonekwa kwaro uye mukushambadzira kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Kuburikidza nateedzano yezviitiko zvatichaedza kutsanangura izvozvi.
Kutanga, imwe yemabhenefiti ayo makuru ndeyekuti iyo Maslow Pyramid inokudzidzisa iwe kuti unzwisise uye upinze munguva pfupi pfupi izvo zvinangwa zvechokwadi zvemutengi kana mutengi. Ichi chinhu chinounza mimwe mhedzisiro senge inotevera:
Simba optimize kutengesa zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo pamusika.
Usatambisa zvisingabatsiri zviwanikwa kuyedza kutsigira zvigadzirwa zvako.
Gadzira zano rakatsanangurwa-rebhizinesi maererano nezvinodiwa nevatengi.
Tarisa pane iyo zvinangwa zvinogona kuzadzikiswa uye chengetedza izvo zvausingakwanise kutora munguva pfupi.
Iwe unenge uine yakawandisa bhajeti uye woita kutarisa bhizinesi rako redhijitari kubva zvino zvichienda mberi.
Inosanganisira yekuongorora system ye kukuziva zvishoma zvishoma uye pamusoro pezvose kuti uzive uine chokwadi chaunofanira kuita nebhizinesi rako kana chiitiko chehunyanzvi.
Kubudikidza neaya akareruka maitiro ehunhu iwe unogona ikozvino kuzadzikisa shanduko mukufunga kwako kweiri iro bhizinesi redhijitari. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi kufunga.
Kushanda kwaro mukutengeserana kwedigital
Piramidhi yeMaslow inogona kuburitsa zvimwe zviitiko zvakawanda kupfuura zvaunofunga mue-commerce. Kuburikidza nhevedzano yezviratidziro zvinoendeswa mune izvi zviito zvine hukama hwakasimba hwemagariro.
Zvido zvako zvekuzviitira
Iwe unogona ikozvino kuziva kuti iwe ndiwe ani semunhu uye kubheja hupenyu hwako pane basa rine zvarinoreva. Semuenzaniso, kuita chirongwa chekutengesa mubhizinesi rako icho chinokwanisika zvizere. Iko kune imwe yemibvunzo yakakosha yekuzadzisa ichi chikumbiro ndeyekuzvibvunza iwe, semuenzaniso, uko zvaunotarisira zvakaiswa pane bhizinesi.
Chinja maitiro ako
Iko kushandiswa kweiyi manejimendi sisitimu kunogona kukupa iwe mitsva mikana mune rako rehunyanzvi chiitiko chausingakwanise kupotsa. Mune izvo zvinodikanwa kuti iwe uunze shanduko nyowani mumaonero ako kugadzirisa hunhu hwekutengesa kubva kunongedzo yekuraira iyo iyo dzidziso inogadzirwa kubva kuMaslow Pyramid inogona kukupa iwe. Ichave zvirokwazvo sarudzo ichave yakakosha kune rako ramangwana rehunyanzvi.
Chengetedza nguva mubasa rako
Uyu ndiwo mumwe meseji waunounza kuburikidza neMaslow's Pyramid. Uye kana zvichikwanisika kuburikidza nehurongwa hwe manejimendi, saka zvirinani zvakanyanya kune zvido zvemagetsi ekutengesa. Hazvishamisi kuti, chimwe chezvidzidzo zvaunogona kudzidza kubva pane ino pfungwa ndechekuti zviitwa zvese zvikuru zvinoda kuedza kwega nehunyanzvi. Iko kuranga muzviito zvaunoita iwe zvakare kuchaita sarudzo yekuita kuti chirongwa chako chibudirire.
Sangana nezvimwe zvinangwa
Imwe kiyi inopihwa neiyi yakakosha dzidziso iri mune yekuti iwe unofanirwa kumisikidza zvinangwa zvako pabasa. Asi hazvisi izvo zvisingakwanisike sezvaunoitika mune imwe nguva. Kana zvisiri, pane kudaro, zvakavakirwa pazvinangwa zvinokwanisika kugadziriswa izvo zvinogona kuonekwa sechikamu chakakosha kwazvo chehurongwa hwekubatanidza hwemakambani edhijitari. Izvo zvakakosha kuti iwe ugadzire zvinangwa zvisina kunyanya kuda chinzvimbo pakutanga. Mushure mezvose, ichi chimwe chezvidzidzo zvakakosha zvaunogona kutora kubva panguva dzino dzePiramidhi raMaslow. Chero zvazvingaitika, tinokukurudzira kuti usaedze chero nguva kumanikidza mamiriro acho.
Zvidzidzo zvinoverengeka zvatinogona kutora kubva kudzidziso iyi
Nepo kune rumwe rutivi, inguva yekuongorora kuti chimwe chinhu chinofanirwa kutariswa ndechekuti, kunyangwe pamitengo yakasiyana, mumunhu mumwe chete, zvinoenderana nenguva dzehupenyu, pane zviyero zvakasiyana zvezvinodiwa. Izvi ndizvo zvaunoda zvaunofanirwa kutarisira kana uchironga rako redhijitari chirongwa. Beyond kumwe kufunga kwezvehupfumi uye pamwe zvakare kubva kune iyo logistical pfungwa yekutarisa yekambani pachayo.
Ongorora zvigadzirwa kana masevhisi atinotengesa
Dzidziso dzavo dzinogona kutisarudzira kumaka mutengo kune zvigadzirwa kana masevhisi ekutengesa kwedu pamhepo. Mupfungwa yekuti aya akakwirira anogona kuratidza kugona kwevatengi vedu. Pane chikero chinotsanangurwa zvizere muPiramidhi raMaslow. Kunyangwe dambudziko hombe ratingave naro kubva panguva dzino chairo kuzivikanwa kwayo kuri pakati peyero yetsika.
Shanduko yezvose zvatinoda
Hatigone kukanganwa chero nguva kuti tinokwanisa kukanganisa vashandisi nenzira ine hunyanzvi. Sezvazviri, semuenzaniso, kushandura zvishuwo kuva zvidikanwi. Iyi nzira yakajairika yekutengesa pakati pemakambani epakati nepakakura. Kuedza kugadzira chinodiwa mune chimwe chikamu cheichi chiitiko uye nekudaro zvichengetedze mutengi kana mushandisi. Kubudikidza neiyi yekutengesa manejimendi sisitimu, zvinokwanisika kuwedzera kutengesa kana kusvika kune hombe nhamba yevashandisi. Iwe unogonesawo kuita iri zano rekuvandudza?
Natsiridza kuvimba pakati pevatengi
Mune imwe nzira zvinhu hazvigone kushayikwa sekudzidzisa muchikamu chino chinobva nekuwedzera kuzvidzora kwemutengi. Izvo ndezvekuvandudza yako margin yekuvimba mukati mako kuyedza kukuita iwe kuti utarise zvakanyanya kune izvo zvitsva zvido zvatinokumbira iwe kubva kubhizimusi redu readhijitari. Iri izano rakajairika iro rakaitwa nechikamu chakanaka chevashandisi vezvekufona kushambadzira zvigadzirwa zvavo kune vatengi. Kunyangwe kutora avo vanobva kumakwikwi. Nekutsungirira kushoma tinogona kuzadzisa zvinangwa nenzira inoshanda kwazvo.
Inopa chigadzirwa chakasiyaniswa kubva kune vamwe vese
Zvingave izvo kuti vanhu vazhinji vane vanobatanidza zvakanyanya kukoshesa kugona. Asi ruzivo harutaure kuti kukosha uku kunogona kuunzwa kunze kuburikidza neMaslow's Pyramid. Asi nekuda kweizvi zvichave zvakakodzera kuti isu tivape chimwe chakasiyana nezvimwe zvese zvitoro zviripo. Izvo hazvisi zvekutengesa chete, asi nezve kupa zano chimwe chakasiyana. Iyi ndeimwe yemakiyi ekubudirira kwemapurojekiti edhijitari, ayo anopa kukosha kwakawedzerwa pamusoro pemamodeli aripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Maitiro ekushandisa sei piramidhi yeMaslow muCommerce?